Ny vavahady IP default 192.168.0.1 dia ampiasain'ny router miaraka amin'ny modem toa ny router D-Link ho adiresy default IP hidirana amin'ny console admin. To configure ny mandroso sy ifotony 192.168.0.1 azo ampiasaina setting.
Dingana hidirana amin'ny IP 192.168.0.1
Raha ny IP Address default ho an'ny Modem / Internet Router dia 192.168.0.1 ao anatin'izany toe-javatra izany dia azonao antoka fa hampiasanao azy io hiditra ao amin'ny console config ho an'ny Modem / Router anao mifehy ny Internet setting. Midira fotsiny amin'ny 192.168.0.1, araho ireto torolalana etsy ambany ireto
Alao antoka fa ny fitaovana dia mifamatotra amin'ny rafitra na amin'ny Ethernet Wire na tsy misy tariby.
Sokafy izao ny navigateur web ampiasainao hidirana amin'ny Internet.
Ao amin'ny bara adiresy, soraty http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
Pejy fidirana amin'ny router anao ary koa ny modem dia hiseho eo amin'ny efijery.
Alefaso ny Ids login default toy ny solonanarana ho fanampin'ny tenimiafinao ho an'ny pejy fanamboarana ny router.
Ny minitra nanoloranao ny firaketana fidirana dia hiditra ao amin'ny pejin-tranonkala fanovana ianao ho fantatrao ny fomba fanovana ny tadiavina.
Tsy mahay mitahiry ny tatitra momba ny antsipirian'ny fidirana eo an-tampon'ny Keywords?
Fandinihana ny bokikely torolalana
Raha tsy nahatadidy ireo mari-pahaizana momba ny fidirana amin'ny 192.168.0.1 ianao aorian'izay dia tokony handinika ny Manual na amin'ny Box of the router. Ho fanampin'izany, tsy maintsy jerenao ny lisitry ny router mahazatra ho an'ny mpampiasa anarana ary koa ny passkey ho an'ny router.
Avereno ny Router
Raha nanova ny antsipirian'ny fidirana default amin'ny router ianao ary tsy niraharaha izany tamin'io fotoana io ny fomba voalohany dia ny miverina mamerina azy io dia ny reset an'ny router miaraka amin'ny toerana misy anao izay mamadika ny fanovana rehetra indray ho lasa default. Ho an'ny reset router:
Raiso amina singa maranitra toy ny paoma nify na Pin ary andramo tadiavina ny lamosina miverina amin'ny router.
Amin'ny fotoana hitanao fa misy switch kely tsiambaratelo. Tsindrio & tazomy ny switch mandritra ny 15-20 segondra eo ho eo.
Io dia hamerina amin'ny laoniny ny fanovana rehetra indray miverina any amin'ny toerana misy anao miaraka amin'ireo anarana mpampiasa / tenimiafina izay novainao. Ka izao dia afaka miditra amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fidirana default ianao.
Ny totalin'ireo IP manokana dia manana adiresy 17.9 tapitrisa isan-karazany, natokana hampiasaina amin'ny tambajotra tsy miankina. Noho izany, ny IP manokana an'ny router dia tsy ilaina ny miavaka.
Ho an'ireo fitaovana rehetra ao anaty tamba-jotra ny router dia mizara adiresy IP voatokana, na ny toeram-pivarotana eo amin'ny sehatry ny asa izany na ny tambajotran-tokantrano kely. Ny fitaovana rehetra ao amin'ny rafitra dia afaka mifandray amin'ny gadget hafa ao amin'ilay rafitra miaraka amin'ity IP manokana ity.
Na izany aza, ny adiresy IP tsy miankina dia tsy afaka miditra amin'ny Internet. Ny adiresy IP manokana dia tsy maintsy ampidirina amin'ny alàlan'ny mpamatsy tolotra Internet, oh: Comcast, Spectrum na AT&T. Ka izao, ny fitaovana rehetra ampiarahina amin'ny Internet tsy mivantana, mifandray amin'ny voalohany amin'ny rafitra, izay miraikitra amin'ny Internet, avy eo mifandray amin'ny Internet lehibe kokoa.